ट्रम्पको भारत भ्रमण: अमेरिकी मीडियामा ‘समोसा’को चर्चा
दिल्लीको यमुना क्षेत्रमा हिंसात्मक प्रदर्शन : प्रहरीसहित चारको मृत्यु
नयाँदिल्ली – भारतको राजधानी दिल्लीको यमुना क्षेत्रमा दुई पक्षबीच भएको हिंसात्मक झडपमा एक जना प्रहरीसहित चार जनाको मृत्यु भएको छ। दिल्लीमा नागरिकता संशोधन कानुन(सीएए) को विरोध र समर्थनमा भइरहेको प्रदर्शनमा
एजेन्सी – भारतको दुई दिने भ्रमणका आज आइपुगेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतसँग तीन अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रक्षा सम्झौता गर्ने बताएका छन् । मोटेरा स्टेडियममा आयोजित नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रमलाई
ट्रम्पले मोदीको कोटभित्र हात हालेको फोटो भाइरल !
एजेन्सी – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दुई दिने भारत भ्रमणमा आएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्रम्पलाई एयरपोर्टमा पुगेर स्वागत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री मोदीले ट्रम्पलाई अंकमाल गरेर स्वागत
मार्क जुकरबर्गलाई काखीको पसिना सुकाउन कर्मचारी !
एजेन्सी – मलेसियाका ९४ वर्षीय प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले राजीनामा दिएका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री महाथिरले राजासमक्ष राजीनामा पत्र बुझाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । उनले नेतृत्व गरेको सरकारमाथि प्रश्न उठ्न
भारतमा ट्रम्पलाई यसरी गरियो स्वागत (फोटोफिचर)
भारतमा ट्रम्पको सुरक्षाका लागि खटाइयो पाँच वटा लंगुर !
काठमाडौं – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सुरक्षाका लागि भारतमा पाँच वटा लंगुर खटाइएको छ । सोमबार दुई दिने भ्रमणका लागि राष्ट्रपति ट्रम्प र उनकी श्रीमती मेलिनिया ट्रम्प भारत आइपुगेका छन्